Nhau - Bhirazi reBritain rinonzwika doro rekupa turu yekunyevera paScotland DRS
Briteni Girazi rinonzwika rinwa cheni yekunyevera paScotland DRS
Briteni Girazi yakayambira kuti mabhizinesi mazhinji akakomba mune chinwiwa chinotakurirwa zvinhu achakanganiswa neScotish Deposit Return Scheme (DRS).
Dave Dalton, mutungamiri mukuru, Bhirazi reGirazi, paMusangano Wezvakatipuka weEnzvimbo
Nekuda kwekuunzwa muna 2022, Britain Glass yakati kunetsekana kunosanganisira kuparara kwe kerbside kudzokorodza girazi, kuwedzera kwemapurasitiki ekurongedza uye CO2 mweya.
Chief Executive Dave Dalton vanyorera Hurumende yeScotland vachitsanangura izvi, uye vakati Britain Glass ichaita zvese zvainogona kutungamira kuiswa kweDRS kuona kuti zvinhu zvakakosha zvinotariswa uye kukumbira chigaro cheindasitiri pane iyo Implementation Advisory Group nyaya yekukurumidzira.
Kuparadzaniswa, akati decarbonisation basa ririkuenderera mberi nekubatana neUK's Glass Futures uye ichangoburwa yakaziviswa Fenicha yeRamangwana nzvimbo kuGermany.
Girazi futures ichave yekutanga kusvinuka-inowanikwa, yakawanda-kuranga girazi yakanyungudutsa nzvimbo uye huru yekutsvakira hubvu yekumwe mafuta mafuta ekushandisa mune enadhiya - chinhu chakakosha kubatsira iyo chikamu chegirazi kusvika pachinangwa chayo cheku decarbonise panosvika 2050 uye kuve mambure- zero pamhepo inobuda.
Iyo ichangobva kuziviswa Samani yeRamangwana ichave yekutanga yakakura-yakakura mahybrid oxe-mafuta choto kumhanya pa80% simba rinowedzeredzwa munyika. Ichatsiva zvazvino simba-mafuta simba masosi uye ndocheka CO2 kubuda ne60%. Mune imwe yekutanga, makumi maviri egirazi emidziyo vagadziri vari kushanda pamwe kuti vatsigire chirongwa chekutyaidzira uye kuratidza pfungwa yacho. Ardagh Chikwata chichavaka choto muGerman muna 2022, pamwe nekuongororwa kwekutanga mhedzisiro yakakodzera muna 2023.
The DRS mirau yakapfuudzwa nezuro masikati (13 Chivabvu) kunyangwe mafoni kubva kuindasitiri, vatengi, uye vanopikisa MSP kuti vanonoke.
Nhengo dzeSNP (36) vakavhota vachifarira maConservatives ekuvhota vachipesana (16) neVashandi neveLiberal Democrats vachiramba (19).
Vachitaura nezvemhedzisiro iyi, Dave Dalton, mukuru weBritish Glass akati: "Isu takanga tisiri tega mukumbira Hurumende yeScotland kuti inonoke kudzora mitemo yeDRS kudzamara maitiro eCCIDID-19 azivikanwa. Mabhizinesi mazhinji, kusanganisira iwo echikamu che indasitiri yedu neyekutsikisa dhizaini haakwanisi kutarisana nemutoro unowedzera iwo urongwa huchaisa pavari.
"Isu tinoramba tichitenda seyakawedzera nzira Yakawedzera Mugadziri (EPR) muenzaniso inokwidza kudzoreredza mitengo yegirazi, kuve inodhura zvakanyanya uye kupa zvakapetwa CO.2 kuchengetedza mari pane DRS muScotland.
"Kunyangwe isu tisingatendi kuti DRS ndiyo mhinduro kwayo yekugadzirisazve magirazi, isu tichashanda neHurumende yeScotland uye manejimendi wechinongedzo kuderedza kukuvadzwa kune indasitiri yeGlassish indasitiri uye kuona kukosha kwakanyanya kwekudzokesa mitengo kuti ipe hunhu hwakakosha uye huwandu hwechiva chinodiwa kune vedu vanogadzira girazi.
Nguva yekutumira: Jun-04-2020